भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारीक साझेदार देश अमेरिका बन्यो
एजेन्सी । अमेरिका २०२१–२२ मा भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार बनेको छ । यसअघि चीन सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार रहदै आएको थियो । भारत र अमेरिकाले आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै जाँदा आगामी वर्षह...
aarthiknews.com . १ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ३२५ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ८० पुलको निर्माण सम्पन्न गरेको छ । सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गत फागुनसम्ममा २६५ किमी सडकखण...
aarthiknews.com . ४० मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
अस्ट्रेलियाबाट फर्केरका युवाको नवलपुरमा साथीमार्टको फ्रेन्चाइज आउटलेट
गैंडाकोट । नेपालकै ठुलो ओटुओ (अफलाइन टु अनलाइन) साथीमार्टले एक्ले साल, नयाँबजार, गैंडाकोट-२, नवलपुरमा आफ्नो नयाँ फ्रान्चाइज आउटलेट सञ्चालनमा ल्याएको छ । ८ वर्ष अष्ट्रेलिया बसेर नेपाल फर्केका प्रदिप...
aarthiknews.com . १ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
एनवाईईएफको चौथो साधारणसभा सम्पन्न, गोयलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन
काठमाडौं । नेप्लिज योङ्ग इन्टरप्रेनर्स फोरम (एनवाईईएफ) काठमाडौं च्याप्टरको चौथो वार्षिक साधारणसभा गत शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । मेरियट होटलमा सम्पन्न सभाले चिराग गोयलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति ...
aarthiknews.com . २ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
अघिकांश विमान मानवीय त्रुटिका कारण दुर्घटना, हालसम्म ३७ वटा विमान दुर्घटना
काठमाडौं । नेपालमा २०११ देखि हालसम्म ३७ वटा विमान दुर्घटनामा परेका छन् । त्यसमा १५ मल्टिइज्जिन विमान, १२ हलिकप्टर, ४ सिंगल इन्जिन विमान, ३ विदेशी विमान र ३ वटा मनोरञ्ज प्रयोजनका हलुका विमान दुर्घटन...
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, बजेटबारे निर्णय गर्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले आइतबार दिउँसो ४ बजे आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट गर्ने भएका छन् । आज आउने बजेटबारे निर्णय गर्न केहिबरे पछि मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने भएको छ । आज मध्याह्न १२ ब...
aarthiknews.com . ३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
तारा एयर अपडेटः लेतेमा ठूलो आवाज आएको भन्दै स्थानीयले गरे प्रहरीलाई खबर
काठमाडौं । पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्कविहीन भएको छ । १९ जना यात्रु बोकेर आज बिहान ९ः५५ मा पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको ९ एनएईटी ट्विनअटर विमान सम्पर्कविहीन भएको हो । मुस्ताङ...
नेपाल बैंकले गर्यो लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशकोे बजेट गोष्ठी सम्पन्न
काठमडौं । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बैंकको बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश स्तरीय बजेट गोष्ठी तथा तालिम कार्यक्रम सम्पन्न...
सम्पर्कविहीन जहाजमा १९ यात्रु सवार, १३ नेपाली, ४ जना भारतीय र २ जर्मनी
काठमाडौं । पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्कविहीन भएको छ । १९ जना यात्रु बोकेर आज बिहान ९ः५५ मा पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको ९ एनएईटी ट्विनअटर विमान सम्पर्कविहीन भएको हो । तारा एय...
काठमाडौं । लागुऔषध खैरो हिरोइनसहित प्रहरीले बेलौरी नगरपालिका–७ पौलाहा मसानघाट क्षेत्रबाट चार जनालाई पक्राउ गरेको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहका अनुसार हि...
काठमाडौं । पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्कविहीन भएको छ । १९ जना यात्रु बोकेर आज बिहान ९ः५५ मा पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको ९ एनएईटी ट्विनअटर विमान सम्पर्कविहीन भएको हो । नागरिक उ...
aarthiknews.com . ४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आइतबारका लागि सुनचाँदीको दरभाउ सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ प्रतितोला ९८ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ ह...
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले ९ महिनामा कमायो करिब २० करोड नाफा
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले ९ महिनामा रू. १९ करोड ६४ ला...
प्रभु बैंकको १ लाख ३४ हजारभन्दा बढी संस्थापक शेयर विक्रीमा
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले १ लाख ३४ हजार ४३१ कित्ता संस्थापक शेयर विक्रीमा ल्याएको छ । बैंकले ३९ हजार ८२० कित्ता शेयर सर्वसाधारणले खरीद गर्न सक्ने गरी विक्रीमा ल्याएको हो भने ९४ हजार ६११ कित्त...
काठमाडौं । श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले जेठ २३ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाहरूका लागि आईपीओ निष्काशन ग...
aarthiknews.com . ५ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
कुलमान नभएको वर्ष विद्युत प्राधिकरणको नाफा ४४ प्रतिशत घट्यो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खुद नाफा ४४ प्रतिशत घटेको छ । कुलमा प्राधिकरणबाट बाहिरिएको वर्ष उक्त कम्पनीको नाफा घटेको हो । अघिल्लो आव २०७६÷७७ को तुलनामा गत आ...
बढी नाफा गर्नेमा तीन वाणिज्य बैंकसहित दूरसञ्चार कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरण
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा तीन वटा वाणिज्य बैंकसहित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सर्वाधिक नाफा कमाउने शीर्ष पाँचमा परेका छन् । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति...
नेपालको पहिलो बजेटः कर्मचारीको तलब बीस लाख रुपैयाँ बढाएको थियो
काठमाडौं । आजभन्दा ६९ वर्ष पहिला २००८ सालमा पहिलो बजेट भाषण भएको थियो । नेपालमा वि.सं २००८ सालदेखि औपचारिकरुपमा बजेट घोषणा शुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख...
aarthiknews.com . ६ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
आजको मौसम पूर्वानुमान : मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने
काठमाडौं । नेपालमा स्थानीय वायु, भारतको उत्तर प्रदेश, विहार आसपास रहेको न्यून चापीय रेखा र पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही ...
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५५६ वटा संकास्पद कारोबार
काठमाडौं । आर्थिक वर्षको २०७८/७९ फागुनसम्ममा १५५६ वटा वित्तीय क्षेत्रमा संकास्पद कारोबार भएका छन् । वित्तीय जानकारी ईकाइका अनुुसार संकास्पद विवरण प्राप्त भएकामध्ये ४६४ वटामा विल्लेषण गरिएको विवरण ...
भारतमा कोइलाको महा संकट, ७ वर्षपछि आयात गर्दै
एजेन्सी । देशमा लगातारको विद्युत् अभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी स्वामित्वको कोल इन्डियाले ठूलो निर्णय गरेको छ । कोल इन्डियाले ७ वर्षपछि कोइला आयात गर्न लागेको हो । सन् २०१५ पछि कोल इन्डियाले आयात गर...
aarthiknews.com . ७ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
प्रत्यक नेपालीको भागमा ६३ हजार ३ सय रुपैयाँ ऋण
काठमाडौं । हरेक नेपालीको भागमा ६३ हजार ३ सय रुपैयाँ ऋणको भार थपिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न दताहरुबाट लिएको ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपा...
बैंकको ब्याजदर फेरि बढ्न सक्ने
काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भए पनि बाह्य दबाव कम गर्न ब्याजदर चलाउन सक्ने संकेत गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै नेपाल राष...
दिउँसो ४ बजे बजेट भाषण, नयाँ के के आउने सम्भावन छ ?
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र२०८० को बजेट आइतबार दिउँसो ४ बजे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्दै छन् । अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९र २०८० को राजश्व आय र खर्चको वार्षिक अनुमान प...
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कूल ६२१ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय गौरवको आ...
aarthiknews.com . ८ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
प्रति व्यत्तिआय १३५ डलरले बढ्ने, जीडीपीको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड पुग्ने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष प्रतिव्यक्ति आय १३८१ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । २०७७÷७८ मा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२४६ डलर थियो । शनिबार अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक...
चालु आवमा अर्थतन्त्र ५.८४ प्रतिशतले वृद्धि हुने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ५.८४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो विस्तार ४.२५ प्रतिशत थियो । सरकारले शनिबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्...
aarthiknews.com . ९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा विज्ञसँग छलफल, फैसलामा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका विषयमा आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा शीर्षनेता तथा विज्ञहरूबीच छलफल भएको छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकार्य...
aarthiknews.com . १८ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट पनि बहुमतले पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार नै राष्ट्रिय सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भइसकेको छ । दुबै सदन...
काठमाडौं । नेपालका जुत्ताचप्पल व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन फुटवयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसियशन अफ नेपालले भृकुटीमण्डपमा सधैँभर मेलाका रूपमा जुत्ताचप्पल बिक्री वितरण हुँदा औद्योगिक प्रदर्शनीमा आँच आएको ...
एजेन्सी । विद्युतीय स्कुटरमा आगलागीका घटनाका बीच अहिले एथर इनर्जीको डिलरसिपमा पनि आगलागी भएको बताइएको छ । यद्यपि कम्पनीले यो सानो घटना भएको बताएको छ । एथर इनर्जीले शुक्रबार ट्विट गरेको छ । चेन्नई श...
aarthiknews.com . १९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
भोलिको बजेटमा चर्चामा रहेका यी विषय कतिको सम्बोधन होलान ?
काठमाडौं । गणतान्त्रिक सरकारले भोलि जेठ १५ गते २०७९/२०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । सरकारले संवैधानिकमा नै व्यवस्था भए अनुसार जेठ १५ गते संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नु गर्दछ । यस पट...
aarthiknews.com . २० घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको अन्तिम परिणाम लगभग आइसकेको छ । बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकामा मतदान हुन बाँकी छ भने उदयपुरको त्रियुग...
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड पहिराले अवरुद्ध भएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका–६ नाम्दीखोला नजिकै आज साँझ ५ः३० बजेको समयमा सुक्खा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार ...
aarthiknews.com . २१ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं विश्वविद्यालयका नौ देशका १५७ विद्यार्थी सहित एकहजार ७१२ विद्यार्थी दीक्षित हुँदै
काठमाडौं । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका २७औँ दीक्षान्त समारोह (दोस्रो चरण)मा विभिन्न सङ्कायका गरी एक हजार ७१२ जना दीक्षित हुने भएका छन् । आगामी जेठ २० गते विश्वविद्यालयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा ...
aarthiknews.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
लमजुङमा ६३५ घरेलु उद्योग दर्ता, महिलालाई ५० प्रतिशत छुट
लमजुङ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लमजुङमा ६३५ वटा घरेलु उद्योग दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को साउनदेखि वैशाख महिनाको अवधिमा सो सङ्ख्यामा घरेलु उद्योग दर्ता भएका कार्यालय प्रमुख मीताक...
रुसबाट श्रीलंकामा पनि पेट्रोल र डिजेल जान थाल्यो
एजेन्सी । पेट्रोलदेखि डिजेलसम्मको गम्भीर अभाव झेलिरहेको श्रीलंकालाई रुसी तेल आपूर्ति भइरहेको छ । साइबेरियन लाइटको रूसी ग्रेड सापुगास्कन्डामा सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेशनको रिफाइनरीमा प्रशोधन गरिनेछ। ...
भारतीय नक्कली नोट छ्यापछ्याप्ती, ३१ मार्चसम्म आरबीआईमा जम्मा भएकामध्ये ८७.१ प्रतिशत नक्कली नोट
काठमाडौं । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का अनुसार आर्थिक वर्ष २०२१(२२ मा नक्कली नोटको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। आरबीआईका अनुसार एक वर्षमा ५०० रुपैयाँको नक्कली नोट दोब्बर भएको छ । गत वर्षको तु...
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको कोरियन भाषा परीक्षा जेठ १९ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) शाखाले कोरिया जानका लागि आवेदन दिएकामध्ये...